टेलिशृङ्खला ‘भद्रगोल’ भित्र ‘भद्रगोल’, पूराना टोली किन बाहिरिए ? - Himalayan Kangaroo
टेलिशृङ्खला ‘भद्रगोल’ भित्र ‘भद्रगोल’, पूराना टोली किन बाहिरिए ?
Posted by Himalayan Kangaroo | २१ भाद्र २०७६, शनिबार १३:३५ |
काठमाडौं । करिब चार वर्षदेखि प्रशारण हुँदै आएको हास्य टेलिशृङ्खला ‘भद्रगोल’ को नयाँ शृङ्खला शुक्रबारबाट सुरु भएको छ। तर, यसमा अभिनय गर्ने पुराना अनुहारका कलाकार भने छैनन्।
टेलिशृङ्खला भद्रगोल मिडियाहब प्रालिको प्रस्तुतिमा प्रशारण हुँदै आएको थियो। तर, असारपछि बन्द भई हिजो शुक्रबारबाट प्रशारणमा आएको हो। नयाँ शृङ्खलामा पुराना कलाकारको उपस्थिति नभए पनि भद्रगोलको निरन्तरा हो भन्ने दृश्यलाई प्राथमिकतासाथ देखाइएको छ।
यसरी कार्यक्रममा पुराना कलाकारको अनुपस्थितिले मिडियाहब र यसै कार्यक्रमका पुराना कलाकारबीच विवाद सतहमा आएको छ।
विशेष गरी मिडियाहबले सर्जकलाई छलेर पारिश्रमिक नदिएको, पुरानो ब्रान्डमाथि मनोमानी गरेको लगायत गुनासो कार्यक्रमका कलाकारहरू कुमार कट्टेल, अर्जुन घिमिरेलगायतको छ। यसविरुद्ध भद्रगोल टिम अदालत जाने मनस्थितिसम्म पुगेको छ।
यसबारे केही सञ्चारमाध्यममा समाचार आए पनि उनीहरूले भने पत्रकार सम्मेलन गरेरै औपचारिक जानकारी दिने बताएका छन्।
‘यसबारे के गर्ने, के नगर्ने हामी अन्योलमा छौं। हाम्रो टिमसँग समन्वय तथा छलफल भइरहेको छ। हामी अदालत जाने भन्ने कुरा सञ्चारमाध्यममा कसरी आयो त्यसमा म अनभिज्ञ छु,’ भद्रगोलका परिकल्पनाकार, लेखक तथा कलाकार कुमार कट्टेल (जिग्री( ले भने, ‘यद्यपि यी सबै विषय सञ्चारमाध्यम र हाम्रा दर्शकसम्म पुर्‍याउन पत्रकार सम्मेलन गरेरै जानकारी गराउछौं।’
मिडियाहबसँगको सम्झौताअनुसार १ सय ७६ भागको पारिश्रमिक अझै नपाएको भद्रगोल टिमले बताउँदै आएको छ। यससँगै जेपिटी (जिग्री पाँडे टिम) क्रिएसनमार्फत् भएको पछिल्लो सम्झौताअनुसार ४३ भागकोे पनि ७ लाख पारिश्रमिक टिमले नपाएको जनाएको छ।
अब जिग्री, पाँडेसहितको पुरानो कलाकारको टिमले आगामी असोज २ गतेबाट भद्रगोलकै शैलीमा नयाँ कार्यक्रम ल्याउने तयारीसमेत सुरु गरेको छ।
Previousनेपालमा लगानी गर्न चीनलाई ६ प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको प्रस्ताव
Nextडेंगुबाट ७० हजार व्यक्ति प्रभावित
सर्वपक्षीय सभाको नाममा षडयन्त्र भयो : वैद्य
८ आश्विन २०७१, बुधबार १४:२१
२० फाल्गुन २०७४, आईतवार ०९:२१